Ogwe Zirconia na -ere ahịa na otu zirconia ntụ ntụ sitere na ngọngọ zieconia maka igwe igwe igwe na -emepụta ihe na onye na -ebubata ya | Yurucheng
Ihe mgbochi ST Zirconia
Ihe mgbochi HT Zirconia
Ihe mgbochi UT Zirconia
Ogwe Zirconia nke SHT Multilayer
Ogwe Zirconia 3D Plus Multilayer
Ihe mgbochi Zirconia site na otu zirconia ntụ ntụ site na ngọngọ zieconia dị elu maka igwe igwe igwe nri
YUCERA 3D gbakwunyere ọtụtụ zirconia ngọngọ nwere agba agba gradient 6, na -ehulata ike na translucency. Anyị nwere ike i copyomi ụcha ezé eke, ike na translucency ruo oke ike. Ọ bụ ihe kacha mma maka ahịa gị na -agbaso usoro siri ike, ọmarịcha permeability na mweghachi nrụzi ihe ịchọ mma, nke dabara maka CAD/CAM niile na sistemụ ntuziaka.
6 akwa agba ọtụtụ
Site na 43% ruo 57% gradient maka nghọta
Ngth Ike na -egosi gradient site na 700 Mpa ruo 1050 Mpa
♠ Kwesịrị ekwesị maka ihu ihu, okpueze, àkwà mmiri 7 na mweghachi niile
Ihe mgbochi/oghere zirconia eze anyị dabara na ụdị dị iche iche nke sistemụ CAD/CAM na sistemụ ntuziaka, dị ka sistemụ Zircon, sistemụ sirona Inlab, sistemụ Kavo, sistemụ Amann Girrbach, na sistemụ Porland, wdg.
Ngwaahịa anyị bụ seramiiki denture zirconia ngọngọ, kwekọrọ na ngwa CAD \_ CAM, akụrụngwa mbipụta 3D yana ngwaahịa ọnụ ndị ọzọ. Dị ka onye na -ebubata ihe na -ekwu okwu ọnụ, anyị nwere ike ịnye ihe eze dijitalụ, akụrụngwa ezé, ngwanrọ eze na ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ dijitalụ.
Usoro dakọtara na nha 3D gbakwunyere na ngọngọ zirconia ọtụtụ:
Mepee CAD CAM Zirkonzahn Aman Girrbach
Dị na Shenzhen mpaghara akụ na ụba pụrụ iche, Shenzhen Yurucheng Dental Material Co., LTD bụ ụlọ ọrụ zuru oke na -emepe emepe, n'ichepụta na ire ahịa akụrụngwa na akụrụngwa.
Yurucheng Cherish ụkpụrụ nke imepụta teknụzụ ọhụrụ na ndị mmadụ, na-etinye uche na R&D, na-arara onwe ya nye inye ndị ọkachamara ọkachamara, mma ka mma yana ngwaahịa dị nchebe maka ndị ọrịa ọnụ.
Yucera nwere njikwa njikwa usoro siri ike iji hụ na ngwaahịa njupụta dị elu. Anyị nwere nzaghachi ngwa ngwa nzaghachi gị. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga -aga ebe gị. Anyị ga -anwa ike anyị niile inye gị ngwaahịa dị elu yana ọrụ udo nke uche. Uergent: +8618018734694 (whatsapp)
1.T/T, West Union, Paypal, L/C na wdg (nnyefe ego nye onye zụrụ ya)
2.Amụma Ndị Ọzọ Amụmaatụ: Anyị nwere ike ịnye nlele na -akwụghị ụgwọ.
3.Iwu ego: Anyị na -enye ego maka nnukwu ego.
4.Iwu OEM: Anyị nwere ike ịnabata iwu OEM.
Nke gara aga: 3D Pro Multilayer Zirconia Blocks Cerec 57% Nghọta 1050 Mpa Zirconia CAD CAM Block Disc Maka Dentistry eze.
Osote: HT White Zirconia Block Cerec High Ike 1200mpa Super Translucent 43% Translucency Zirconium
Ihe mgbochi Zirconia 3d Pro Multilayer
Ihe mgbochi Zirconia 98mm
Mkpọchi Zirconia kacha mma
Ọnụ nke ihe mgbochi Zirconia Cerec
Mkpọchi Zirconia eze eze cam
Ngọngọ Zirconia eze
Onye na -emepụta ihe mgbochi Zirconia eze
Ihe mgbochi Zirconia
Ngọngọ eze Zirconia
3D Multilayer Monolithic Zirconia Bank Dental M ...
3D Plus/ Pro Ceramic Dental Zirconia Block Self ...
101-201, Owuwu 4, No.1 Alaka nke Zhongcheng Life Science Park, Nke 14, Zhongxing Road, Xiuxin Community, Kengzi Street Office, Pingshan District, Shenzhen, China.